ကမ္ဘာ့ဖလား Resorts	သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများ
ဒီ site ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်, သင်တို့ရှိသမျှသည်တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာ, Use ဤ web site ကိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူနှင့်သင်မည်သည့်သက်ဆိုင်သောဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်ကိုက်ညီမှုများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ကြောင်းသဘောတူကြသည်။ သင်တို့သည်ဤဝေါဟာရများမဆိုနှင့်အတူသဘောမတူဘူးဆိုရငျ, သင်သည်ဤ site ကိုသုံးခြင်းသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ခြင်းတို့မှပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။
2. ကိုအသုံးပြုခြင်း License ကို
ခွင့်ပြုချက်ကိုယာယီသာကြည့်ရှုပုဂ္ဂိုလ်ရေး non-စီးပွားဖြစ်ကူးပြောင်းရေးကာလများအတွက် web site ကို Meteodb ရက်နေ့တွင်သောပစ္စည်းများ (သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ် software) ၏တစျမိတ္တူကို download လုပ်ပါမှခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လိုင်စင်၏ဤပြဋ္ဌာန်းချက်, ခေါင်းစဉ်မပြောင်းရွေ့နှင့်ဤလိုင်စင်အောက်၌သင့်ကိုမ may:
စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များသို့မဟုတ် (စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ် Non-စီးပွားဖြစ်) ဆိုအများပြည်သူ display ကိုအသုံးပြုပစ္စည်း;
decompile သို့မဟုတ် web site ကို Meteodb အပေါ်ပါရှိသောမည်သည့်ဆော့ဝဲ engineer reverse ဖို့ကြိုးစား;
ပစ္စည်းများအနေဖြင့်မည်သည့်မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်အခြားစီးပွားဖြစ် notation ကိုဖယ်ရှား; သို့မဟုတ်
သင်တို့သည်ဤကန့်သတ်မဆိုချိုးဖောက်ရာနှင့်မဆိုအချိန် Meteodb မှာရပ်စဲခံရလျှင်ဒီလိုင်စင်ကိုအလိုအလျောက်ရပ်ဆိုင်းလိမ့်မည်။ ဤသူတို့သည်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဤလိုင်စင်များ၏ရပ်စဲအပေါ်သို့သင့်ရဲ့မြင်ကွင်းရှုရပ်စဲအပေါ်သို့, သင်သည်သင်၏အပိုင်ထဲမှာရှိမရှိအီလက်ထရောနစ်သို့မဟုတ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ format ကိုမဆိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများဖျက်ဆီးရမည်။
site ပေါ်တွင် materials Meteodb "ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်" ထောက်ပံ့ဖြစ်ကြ၏။ Meteodb အမြန်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်မရှိ, အာမခံစေသည်နှင့်ဤဥပဒေန့်အသတ်မရှိဘဲအပါအဝင်အခြားအာမခံ, ကုန်သည်ဆိုလိုအာမခံသို့မဟုတ်အခြေအနေများ, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးသို့မဟုတ်အခြားလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကို non-ချိုးဖောက်မှုများအတွက်ကြံ့ခိုင်ရေး disclaims နှင့် negates ။ အပြင်, Meteodb တိကျမှန်ကန်မှု, ဖွယ်ရှိရလဒ်များကို, သို့မဟုတ်ထိုသို့သောပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဤ site ကိုမှဆက်စပ်နေသည်ဆိုဆိုဒ်များတွင်စပ်လျဉ်းပစ္စည်းများအသုံးပြုမှု၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည်၎င်း၏ web site ကိုအပေါ်သို့မဟုတ်အခြားရည်ဆိုကိုယ်စားအာမခံသို့မဟုတ်လုပ်မပေးပါဘူး။
အဘယ်သူမျှမအဖြစ်အပျက် Meteodb.com သို့မဟုတ်ယင်း၏ပေးသွင်းအတွက် website ကို Meteodb အပေါ်ပစ္စည်းများသုံးစွဲဖို့ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၏ထွက်ပေါ်ထွက်လာသော (ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ဒေတာသို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်း၏ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, သို့မဟုတ်မှုကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြတ်တောက်ရန်, အပါအဝင်) မည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်ဖြစ် ပင် Meteodb Meteodb သို့မဟုတ်အခွင့်အာဏာကိုယ်စားလှယ်အတွက်နှုတ်သို့မဟုတ်ထိုသို့သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ဖြစ်နိုင်ချေ၏အရေးအသားအတွက်အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အချို့တရားစီရင်မှု implied အာမခံ, သို့မဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ဖွစျပှားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူမှု၏ကန့်သတ်မှုအပေါ်ကန့်သတ်ခွင့်ပြုထားပါဘူးကြသောကြောင့်, ဤကန့်သတ်မှုသင်လျှောက်ထားမည်မဟုတ်ပါ။
ထို web site ကို Meteodb အပေါ်ပေးအပ်သည်အဆိုပါပစ္စည်းများ, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်ပုံ, သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံပြပွဲအမှားများကိုထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Meteodb ၎င်း၏ site ပေါ်တွင်ပစ္စည်းများကိုမဆို, တိကျမှန်ကန်ပြီးပြည့်စုံသို့မဟုတ်လက်ရှိဖြစ်ကြောင်းအာမမခံနိုင်။ Meteodb ကြိုတင်အသိပေးမပါဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်ယင်း၏ web site ကိုပေါ်ပါရှိသောပစ္စည်းများအပြောင်းအလဲများကိုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Meteodb, သို့သော်, ပစ္စည်းကို update လုပ်ဖို့ဆိုကတိကဝတ်လုပ်မပေးပါဘူး။
Meteodb ယင်း၏အင်တာနက်ကို site ကိုမှကားနှင့် ဆက်စပ်. ဆိုဒ်များအားလုံးပြန်လည်သုံးသပ်မဟုတ်, မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောဆိုက်များတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုတာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့် link ကိုထည့်သွင်း၏ထောက်ခံချက် Meteodb site ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှုမှာမဆိုဤကဲ့သို့သောအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏အသုံးပြုခြင်း။
သုံးစွဲမှုစည်းမျဉ်းများအတွက် 7. အပြောင်းအလဲများ
Meteodb ကြိုတင်အသိပေးမပါဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုမှုဤဝေါဟာရများပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ဒီ site ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သုံးစွဲမှုသည်ဤစည်းကမ်းချက်များ၏လက်ရှိဗားရှင်းအနေဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့သဘောတူသည်။